Sarin'i Dr. Joseph Tkach - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Ny ivon'ny WKG > Portrait of Dr. Joseph Tkach
Joseph Tkach dia pasitera jeneraly sy Tale Jeneralin'ny «CEONy Fiangonan'Andriamanitra eran-tany », fohy WKG, anglisy "Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany". Hatramin'ny 3. Aprily 2009 dia novana ny anarana hoe «Fahasoavana iraisam-pirenena fahasoavana », Dr. Tkach dia nanompo ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany ho minisitra voatokana hatramin'ny 1976. Nanompo ireo vondrom-piarahamonina tany Detroit, Michigan izy; Phoenix, Arizona; Pasadena sy Santa Barbara-San Luis Obispo.
Ny rainy Joseph W. Tkach sen., Dia notendren'i Dr. Tkach amin'ny pasitera jeneraly. Ny Tkach taloha dia maty tamin'ny volana septambra 1995 rehefa lasa jeneraly pasitera i Joseph Tkach.
Dr. Ny fampiofanana nataon'i Tkach dia nahitana ny fanatrehana ny ambasadera ambasadaoro nanomboka ny taona 1969 ka hatramin'ny 1973, izay nahazoany mari-pahaizana momba ny teolojia. Tamin'ny 1984 dia nahazo mari-pahaizana momba ny fitantanan-draharaha tao amin'ny Western International University any Phoenix, Arizona izy. Tamin'ny Mey 2000, nahazo mari-pahaizana PhD momba ny teolojia tao amin'ny Azusa Pacific University, Azusa, California izy.
Ny traikefany arak'asa tamin'ny sehatry ny asa sosialy dia nanomboka tamin'ny 1976, ary niasa tao amin'ny Arizona's Boys Ranch, fikambanana tsy miankina. Ny andraikitra sahaniny dia ahitana ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny programa fanarenana ho an'ireo meloka amin'ny zaza. Nanomboka ny taona 1977 ka hatramin'ny 1984 dia mpiasa sosialy ho an'ny fanjakana Arizona. Izy no niatrika ny fepetra fanohanana natao ho an'ny fampandrosoana ny olona manana olana eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monina. Nanomboka ny taona 1984 ka hatramin'ny 1986 dia niasa tao amin'ny Intel Corporation any Phoenix izy, ary nitarika ny departemanta ho an'ny fanohizana ny fampianarana amin'ny sehatry ny serivisy. Ny taona 1986 izy dia nanakarama ny fitantanan'ny fiangonana ny Fiangonan'Andriamanitra eran-tany.
Ny fampandrosoana kristiana, ny fitoriana filazantsara sy ny firaisana dia tena manan-danja amin'i Joseph Tkach. Manompo eo amin'ny biraon'ny Fikambanana Nasionaly Evanjelika ary miasa ao amin'ny filan-kevitra mpanolotsaina ao amin'ny American Bible Society. Ho an'ny Mission America dia manohana sy mandrindra tambajotra kristiana momba ny fampianarana tsy ara-Baiboly amin'ny fivavahana hafa izy. Manampy amin'ny komity mpitsabo ao amin'ny Oniversite ao Azusa Pacific ihany koa izy. Mandray anjara amin'ny fihaonambe isam-paritra sy iraisam-pirenena amin'ireo mpitarika ao amin'ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany izy mba hampandrosoana ny fitomboan'ny Kristiana, ny fifanakalozana fifanakalozana ary ny fifanakalozan-kevitra momba ny tanjon'ny Fiangonana amin'ny taona ho avy.
Teraka tamin'ny 2 izy3. Teraka tamin'ny Desambra 1951 tany Chicago, Illinois, ary nandany ny ankamaroan'ny fahazazany tany mandra-pifindran'ny ray aman-dreniny tany Pasadena tamin'ny 1966. Nivady izy sy Tammy vadiny tamin’ny 1980. Manan-janakalahy atao hoe Joseph Tkach III sy Stephanie ny zanany vavy.